ေဗဒင္ Archives - Achawlaymyar
26.May.2022 မှ 1.Jun. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
May 26, 2022 by Achawlaymyar
26.May.2022 မှ 1.Jun. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီအပတ်အတွင်းအိမ်မီးလန့်တတ်သည်။ ခရီးတစ်ခုထွက်ရမည်။ ရွှေ (သို့) အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ထွက်တတ် သည်။ လုပ်ငန်းများမပြီးပြတ်ပဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ လူမျိုးခြားအကူညီရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နာရေး သတင်း တစ်ခုကြားရမည်။ မိမိမသိသော်လည်း လာရောက် ပါတ်သက်မည့်သူများနှင့် ကြုံတွေ့ရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ကိုသာ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်မှ အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာတွေ အရမ်း များလာမယ်။ အပြောအဆို မတတ်လို့ လူရင်းတွေနဲ့တောင် စကားများရတတ်တယ်။ ဘယ်အလုပ်မှာမဆို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားယွင်းလွယ်လို့ သတိထားရ မယ်။ အကြံအစည်၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အကောင်အထည် ပေါ်လာမယ့်ကာလ ဖြစ် တယ်။ ရုန်းကန်မှုနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေလည်း လိုက်ပါလာမယ်။ အခွင့်အရေးတွေလည်း ရလာနိုင်တယ်။ ဆုံးဖြတ် ချက် … Read more
စနေသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
May 24, 2022 by Achawlaymyar
စနေသားသမီး တစ်နှစ်စာဟောကိန်း ဒီနှစ်မှာ စနေသားသမီးတွေ safe ဖြစ်တဲ့နှစ်ပါတယ်။ မလုံခြုံတဲ့ ဘဝ၊ မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားတွေကနေ စတင်ပြီး အနယ်ထိုင်လာပါပြီ။ စတင်ပြီးအခြေကျလာပါပြီ။ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေတဲ့ စနေသားသမီးများ ဒီနှစ်မှာ တော့ စတင် အိန္ဒြေရလာပြီးလို့ပြော ရပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေငြိမ်စပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ နှစ်အပိုင်းအခြားဖြစ် တာမို့ ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ…ဘာတွေကြံစည်ဆုံးဖြတ်ရမလဲ…အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာမျိုး တွေကို စတင်စဉ်းစားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်စီမံကိန်းတွေအတွက် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ ရိုးရိုးတွေးပါ။ တစိုက်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်ပါ။ ဒါဆို ဒီနှစ်ဟာ မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့အချိန် နေမင်းထွန်းလင်းလိုက်သလို ၊ မိုးရွာပြီးစ ကောင်းကင်ယံလို ကြည်လင်တောက်ပလာမဲ့နှစ်ပါပဲ။ စနေသားသမီးတွေ ဒီနှစ်က မညံ့တော့ပါဘူး။ #အလုပ်စီးပွားကံ အလုပ်တွေတကယ်ကို ကောင်းလာပါပြီ။ရာထူးတိုးဖို့ကြန့်ကြာနေသူများ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရာထူးဌာနတွေကို ရပါလိမ့်မယ်။ အရင်က ချောင်ထိုးခံထားသူများ ၊နေရာပျောက်နေသူများ စိတ်မပျက်ပါနဲ့တော့။ သေချာပေါက် နေရာပေးခြင်း၊မြှောက်စားခြင်းကိုလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ … Read more
May 20, 2022 by Achawlaymyar
ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ပြင်လို့မရတဲ့ အားနည်းချက်လေးများ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးလရာသီခွင်အရ ကိုယ့်အားနည်းချက်က ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ (1) Aries (March 20 – April 20) မိဿရာသီဖွားတွေကတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ အတော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ ထိပ်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးတွေရှိတတ်တာက သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်တဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်တိုင်းမကျတဲ့စိတ်တွေက အမြဲလိုလို ဖိစီးနေတာပေါ့။ (2) Taurus (April 21 – May 20) ပြိဿရာသီဖွားတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အရမ်းပျင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာလေးပဲ အမြဲနေချင်ကြတာပါ။ တစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လည်း အရှုံးတွေနဲ့ကြုံရမှာစိုးရိမ်စိတ်ကကြီးစိုးနေတာကြောင့် မလုပ်ဖြစ်လိုက်တာများပါတယ်။ ပြီးတော့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်လိုက်ရတာမျိုးကို လုံးဝမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ (3) … Read more
May 19, 2022 by Achawlaymyar
19.May.2022 မွ 25.May.2022 အထိတစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း #တနဂၤေႏြ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သားသမီးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပူပန္ရတာအလုပ္မ်ားရတာမ်ိဳးေတြၾကဳံရတတ္ပါ တယ္။ ရိုးအသူမ်ားသတိထားပါ။ ကိုယ္မသိတဲ့ နယ္ပယ္က အလုပ္ကိစၥမ်ားကို တစ္ဖက္လူေျပာတိုင္းမယုံလိုက္ပါနဲ႔။ ဒီအပတ္က လူလိမ္ခံရလြယ္တဲ့ကာလျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အလုပ္စီးပြားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးကံအားေကာင္းၿပီး ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြခ်ဲ႕ထြင္နိုင္လိမ့္မယ္။ ပညာအား၊လူအားေတြနဲ႔ကူညီမဲ့သူေတြေပါမ်ားတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အားနည္းတဲ့ မိသားစုဝင္ေငြ၊ မိမိဝန္ထမ္းေတြကို အကူအညီေပးရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားတဲ့ကာလျဖစ္ တာမို႔ စိတ္လဲ ၾကည္လင္ၿပီးေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား လက္တြဲညီညီ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္တိုးတတ္ေအာင္ျမင္မဲ့ကာလပါပဲ။ လခစားဝန္ထမ္း မ်ားရာထူးတိုးျခင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မ်ိဳးခံရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေနေကာင္းသက္သာရွိပါၿပီ။ ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ား တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့ပါးသက္သာခြင့္ရပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကံေတာ့ အနည္းငယ္ညံ့ဖ်င္းေနတာ မ်ိဳးေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ခ်စ္သူကိုအခ်ိန္မေပးနိုင္တာေၾကာင့္ ခ်စ္သူရဲ့ ၿငိဳျငင္အျပစ္တင္ျခင္းခံရပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရး … Read more
တစ်နှစ်တစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ဖို့ နည်းလေး..See more. ..
May 18, 2022 by Achawlaymyar
သက်ရောက်တွက်နည်း တစ်နှစ်တစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ဖို့ နည်းလေးပါ။ တွက်နည်း မိမိရောက်ဆဲ အသက်ကိုတည် ၈ နဲ့စားပါ။ အကြွင်းကိုယူ၍ လက်ယာရစ်ပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်ရက်ဆိုရင် ၂၆ ယူရပါမည်။ ဥပမာ။ ။ အသက် ၂၆ နှစ် တနင်္လာသား ၂၆÷၈=၂ ကြွင်းသည်။ တနင်္လာသား ၂ ကြွင်းဖြစ်၍ တနင်္လာသက်ရောက်မှ စ၍ ၂ ကွက်မြောက်ကို ကြည့်လျှင် အင်္ဂါသက်ရောက် ကျသောကြောင့် အဂါင်္သက်ရောက်အဟောကိုဖတ်ပါ။ တနင်္လာသက်ရောက် သောမဂြိုလ် အချစ်ရေး မေတ္တာရေး စန်းပွင့်ခြင်း အမွေအနှစ် ဥစ္စာများရတတ်ခြင်း မောင်ကောက်ရ သူဌေးကျော်ကိန်းဖြစ်လို့ စီးပွားဥစ္စာ ရတနာတိုးတတ်၍ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ မြေယာအမွေအနှစ်ရတတ်ပါမည်။ အထက်လူကြီးများ၏ ချီးမြှင့်မြှောက်စားမူခံရတတ်ပါမည်။ ကဆုန် ဝါခေါင် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် … Read more
May 10, 2022 by Achawlaymyar
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ ဘဝတစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားအံ့ စီးပွားတက်အံ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျောဇောထင်ရှားအံ့ အကောင်းပြော ချီးမွမ်းခံရလတ္တံ့ တရားထူးအသိထူးရအံ့ ရာထူးတိုးလစာတိုးခြင်း၊အလုပ်နေရာကောင်းရရှိခြင်းများကြုံလတ္တံ့ ကံတရာ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးတို့၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ခံရလတ္တံ့စိတ်ထဲမှာ ဖြတ်ခနဲပေါ်လာလျှင် ဆတ်ခနဲ ထလုပ်ပါ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ၊ အခြေအနေကောင်း ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်း ၊ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်း ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများရလတ္တံ့ ကောင်းသောအကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်လတ္တံ့ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာများ ရွေးချယ်ရခက်သော အခြေအနေများကြုံရလတ္တံ့ လူကြီးတစ်ယောက်၏အကူအညီ ကြီးကြီးမားမားရအံ့ မိတ်ဆွေရင်း ဆရာရင်းများထံမှလည်း အကူအညီကောင်းများရအံ့ ငွေရေးကြေးရေး – ငွေကြေးကံ အင်မတန်ကောင်းနေအံ့ ရေစီးသလိုငွေဝင်နေအံ့ နေရာမျိုးစုံက ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ငွေအဝင်ကြမ်းနေအံ့။ အဝင်လည်းကြမ်း အထွက်လည်းကြမ်း ဖြစ်နေအံ့ ဝင်သလောက် သုံးဖြုန်းမိနေအံ့ ။ မလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် မသုံးမိရန်သတိပြုပါ … Read more
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ ( ၁၁ )ချက် တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြ တာသောကြာ ကိုယ့်ချစ်သူ အပေါ်မှာ အပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက် သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီး ပူပန်ပေး တတ်တာသောကြာ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ စိတ်ကို အပြင်ကို ထုတ်ပြလေ့ မရှိပဲ စိတ်ထဲ ကပဲ ကျိတ်ပြီး ဝမ်းနည်းနေ တတ်တာသောကြာ ဖြစ်လာသမျှ အရာရာကို ရင်ဆိုင် ရဲသလိုဖြစ် မလာသေးတဲ့ အရာတွေ ကိုလဲကြိုပြီးစ ဉ်းစားတတ်လေ့ ရှိတာသောကြာ အပြင်ပန်းကြည့်ရင် မာနကြီး တယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ် တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိ ရတာသောကြာ စိတ်ကူး ယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေ တစ်ယောက်ထဲ ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေ ရတာကို သဘောကျတာသောကြာ စိတ်ရှုပ်ရမယ့် … Read more